မိန်ဇိမ်ငှက် - ဝီကီပီးဒီးယား
At Chambal River, Uttar Pradesh, India
E. recurvirostris range E. magnirostris range
မိန်ဇိမ်ငှက် သည် "ကာရာဒရီအီဖောမီး" မျိုးစဉ်တွင်လည်းကောင်း၊ "ဗူရင်နီဒီး"မျိုးရင်းတွင်လည်းကောင်း ပါဝင်၍ ပါဏဗေဒအလိုအားဖြင့် "အီစာကပ်ရီကာဗီရိုစတြစ်" ဟု ခေါ်သည်။
မိန်ဇိမ်ငှက်သည် အလွန် မြင်ရခဲသော ငှက်မျိုးဖြစ်၍ လူသိနည်းသည်။ ကိုယ်အလျား ၂ဝ လက်မ ရှိသည်။ နှုတ်သီးထိပ်သည် အပေါ်သို့ ကောက်မသွားဘဲ ဖြောင့်တန်း၍ နေသည်။ ခြေတံရှည်၍ ခြေချောင်း ၃ ချောင်းရှိပြီးလျှင် ကြီးသော မျက်စိများရှိသည်။မိန်ဇိမ်ငှက်သည် ကျယ်လောင် စူးရှသော အသံဖြင့် အော်တတ်သည်။ သို့ရာတွင် သွားရောက်နှောင့်ရှက်လျှင် မြွေတွန်သကဲ့သို့ အော်သည်။ သားပေါက်ချိန်၌ ညဉ့်အခါ မိန်ဇိမ်ငှက် အော်သံကို တစ်ခါတစ်ရံ ကြားရသည်။
မိန်ဇိမ်ငှက်များသည် ပင်လယ် သဲသောင်ပြင်နှင့် ကျောက်တန်းများ၊ မြစ်ကြီးများ၏ သဲကမ်းပါးများတွင် ကျက်စားသည်။ သဲသက်သက်ထက် ရွှံ့၊ ကျောက်ခဲကလေးများနှင့် အပင်ကလေးများ ရှိသည့် နေရာကို ပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။ သားပေါက်ချိန်မှတစ်ပါး အခြားအချိန်များ၌ ဝပ်၍မနေတတ်ချေ။ လူအနားကပ်လာသော်လည်း မပြေးဘဲ စိမ်းဖျော့ဖျော့ခြေတံရှည်ကြီးများဖြင့် ရပ်ကြည့်နေတတ်ကြသည်။ မိုးရာသီနှင့် ဆောင်းရာသီများတွင် ၁၂ ကောင်မှ အကောင် ၂ဝ ထိ အုပ်ဖွဲ့၍ အစာရှာထွက်ကြသည်။ မြစ်ရေကြီးသည့်အခါ မိန်ဇိမ်ငှက်အုပ်များသည် ရေကြီးမှတ်ပေါ်တွင်ပေါက်သော မြက်ခင်းပြင်များ၌ သွားလာ ကျက်စားနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။
နွေရာသီတွင် မိန်ဇိမ် ငှက်ကလေးများဥမှ ပေါက်ကြသည်။ ဥများကို မြစ်သဲကမ်းပါးပေါ်တွင် အုလေ့ရှိရာ၊ ကျောက်ခဲကလေးများနှင့် ဆင်တူ၍ မှားယွင်းတတ်သည်။ တမြုံလျှင် ဥ ၂ ဥ ရှိတတ်သည်။ ဥအရောင်မှာ အဝါမှ အညိုရောင် ဖြစ်ပြီးလျှင် အမည်းတွန့်များ ပါရှိသည်။
အရှေ့တောင်အာရှ ကျွန်းဆွယ်နှင့် ဩစတြေးလျကျွန်းတွင် မိန်ဇိမ်ငှက်ကို တွေ့ရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြိတ်ကျွန်းစု၊ ဧရာဝတီမြစ်တစ်လျှောက်၌ မြစ်ဆုံမှ ဟင်္သာတမြို့ အထိ ၊ မိုးကောင်းနှင့် ရွှေလီမြစ်များ ၊ ပုသိမ်ဖက်ရှိ ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းနှင့် စစ်တောင်းနှင့် စစ်တောင်းမြစ်ဝများတွင် တွေ့ရလေသည်။
↑ BirdLife International (2013). "Esacus recurvirostris". IUCN Red List of Threatened Species 2013. IUCN. old-form url
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မိန်ဇိမ်ငှက်&oldid=548880" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၂:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။